Sharuucda gaarka ah - HEL
Cinwaanka bogeena waa : https://hel.so.
Macluumaadka shakhsiga ah ee aan soo uruurino iyo sababta aan u ururino
Markay booqdayaashu faallooyinka ka bixiyaan halkaan waxaan ururineynaa xogta lagu muujiyey baalka faallooyinka, iyo sidoo kale cinwaanka booqdaha, IP-ga booqdaha iyo xarkaha isticmaaleha boga si u nooga caawiyo ogaanshaha xog qaldan.
arig qarsoodi ah oo laga sameeyay cinwaanka emaylkaaga (oo sidoo kale loo yaqaan hash) ayaa laga yaabaa in lagu siiyo adeegga Gravatar si loo arko haddii aad isticmaaleyso. Qaanuunka arimaha khaaska ah ee adeega ‘Gravatar’ waxaa laga heli karaa halkan: https://automattic.com/privacy/. Kadib oggolaanshaha faallooyinkaaga, sawirkaaga astaanta guud ayaa loo arki karaa dadweynaha marka loo eego faalladaada.
HASSAN on Suuq Geeye
HASSAN on Farsama yaqaan
Suuqa Hel on Suuq Geeye